मनोरञ्जन « Tuwachung.com
राईले मगरलाई सुमो चढाएर सोलु पुर्याउँदा हल्लाखल्ला
काठमाडौं । गायक नेत्र राईले गायिका तारा श्रीष मगरलाई सुमो चढाएर सोलुखुम्बु पुर्याएका छन् । गायक राईले गीतमार्फत गायिका मगरलाई सुमो चढाएर सोलुखुम्बु पुर्याएका हुन्
किरण गजमेर द भ्वाइस अफ नेपाल–३ विजेता
काठमाडौं । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल–३’ को उपाधि किरण गजमेरले जितेका छन् । गजमेरले सबैभन्दा धेरै भोट पाएर चर्चित सिङ्गिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल–३’ विजेता बनेका हुन् ।
२ हजार गीत गाइसकेकी गायिका मेलिना राईको पुख्र्यौली घर हलेसी
स्टेजमा गीत गाउन उक्लिरहँदा मेलिना चाम्लिङ राई सानी देखिन्छिन् । जब राईले गीत गाउन सुरु गर्छिन्, तब दर्शक ताली बजाउँदै नाच्न थाल्छन् । कहिले ननाच्नेकालाई पनि नाचौं–नाचौं बनाइदिन्छ उनको स्वरले
किराती पहिरनमा गायिका राईका ९ तस्बिर
गायिका मीना राई गीतमात्रै गाउँदिनन् । गायिका राई साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँछिन् । उनले गीत, गजल, मुक्तक र कवितासम्म लेख्न भ्याएकी छन् । उनले लेखेको गीत अन्य गायक–गायिकाले समेत
साकेला फोटो कन्टेस्ट–२०२१ मा गायिका राई विजयी
काठमाडौं । साकेला फोटो कन्टेस्ट–२०२१ मा गायिका मीना राईले बाजी मारेकी छन् । साङ्केन क्रियसनले वैशाखे पूर्णिमा उँभौली–२०७८ का अवसरमा आयोजित साकेला फोटो कन्टेस्ट–२०२१ मा गायिका राई विजयी भएकी हुन्
२१ तस्बिरमा वरिष्ठ गायक बमबहादुर कार्की
वरिष्ठ गायक बमबहादुर कार्कीको आवाज सुन्न थालिएको ३९ वर्ष भइसक्यो । वरिष्ठ गायक कार्कीले संवत् २०३९ बाट गीत गाउन थालेका हुन् । घमिर गाउँपालिका–७ गुल्मीनिवासी उनको ८२ वटा गीतिएल्बम सार्वजनिक
प्रधानमन्त्री भए ६ महिनामै कोरोनामुक्त देश बनाउने संगीतकार राईको उद्घोष
खोटाङ । संगीतकार शान्तिराम राईले आफू प्रधानमन्त्री भए ६ महिनामै देशलाई कोरोनामुक्त बनाउने दाबी गरेका छन् । प्राज्ञ राईले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए प्रतिपरिवारलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सामाजिक
सिन्धुपाल्चोक । वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको ८४ वर्षका उमेरमा बिहीबार निधन भएको छ । छातीमा समस्या देखिएपछि बसुन्धरास्थित न्युरो अस्पताल काठमाडौंमा उपचाररत प्रधानको निधन भएको हो । पुख्र्यौली
नाम्चे (सोलुखुम्बु) । नाम्चेबाट पूर्वतिर हेर्दा थामसेर्कु, कुसुमकंगारू, आमडब्लम र विश्वकै छानो मानिने सगरमाथा आँखै अगाडि देखिन्छन् । पश्चिमपट्टि हेरेमा थक्सेर्मु र फरिलाप्का देखिन्छन् । उत्तरतिर हेर्दा खुम्बिला र तबुचे
मिस मगर २०१४ को ताज पहिरिएपछि सरिष्मा राम्जाली मगर मोडलिङमा लागिन् । म्याग्दीकी मगर कल्चरल र बेली डान्समा त्यत्तिकै जमेकी छन् । त्यसैले स्वदेश तथा विदेशमा हुने महोत्सव, सांस्कृतिक तथा
सपना नदेख्ने मानिस को होलान् र ? सपना देख्नुपर्छ । यस मामिलाबाट गायिका मीना राई अछुतो रहिनन् । गायिका राईले पनि सपना देखेकी थिइन् । देखेजति सपना पूरा हुन्छन् भन्ने
नीलम आङबुहाङ राई गीतिएल्बम सार्वजनिक गर्ने लाहुरे समुदायका पहिलो गीतकार हुन् । संवत् २०६२ मा सार्वजनिक ‘जुनी–जुनी’ गीतिएल्बमले गीतकार राईलाई स्थापित गरायो । इलामले जन्माएको लोभलाग्दो प्रतिभा उनी इलामजस्तै शान्त
एउटा सुन्दर घर बनाउने सपना जोकोहीको हुन्छ । धेरै मान्छे यो सपना पूरा गर्न संघर्षरत छन् । घरविनाको जिन्दगी के जिन्दगी भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । घरविना पनि हुन्छ
घुमघाममा निस्कनु भनेको मनोरञ्जनमात्रै होइन, आफू बसेको समाजमा कस्ता–कस्ता मानिस बस्दारहेछन् ? उसलाई असर पार्ने कुरा के–के रहेछन् ? तिनको हालखबर के रहेछ भनेर बुझ्ने अवसर पनि हो । दुःखमा
अहिले हरेक पत्रिकाले कलासँग सम्बन्धित सामग्रीलाई छुट्टै पाना व्यवस्था गरेका छन् । दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनमा चलचित्र समाचारले विषेश महत्व राख्छ । ठूला दैनिक पत्रिकाले लगभग राजनीति र अर्थ
ओखलढुंगा । महेश श्रेष्ठ व्यावसायिक कलाकार होइनन् । सिद्धिचरण नगरपालिका–११ रामबजारका ३१ वर्षीय श्रेष्ठ फेसन डिजाइनर हुन् । उनका बुवा विश्व श्रेष्ठ साइनबोर्ड पेन्टर हुन् । बुवाका कारण ब्रस चलाउने
कुनै पनि जातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जननी एवम् पहिचानको स्रोत उद्गम थलो हो । संसारको विभिन्न क्षेत्रमा बसोवास गर्न पुगे पनि उद्गम थलोकै नामबाट परिचित हुने गर्छन् । इतिहासको
दुर्छिम (खोटाङ) । अदृश्य कला केन्द्रको पाँचौं प्रस्तुति ‘मायाको चिनो’ पूर्वेली लोकजुहारी तुवाचुङ टीभी युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम खोटाङनिवासी गायक कुवेर राईको ‘सोल्टिनी’को अपार
‘एक दिनमा ?,’ गायिका जुना प्रसाईंले सुनाइन्, ‘पाँचवटा गीतसम्म रेकर्ड गरेकी छु ।’ एक दिनमा पाँचवटा गीत रेकर्ड गर्नु भनेको सामान्य काम होइन । यही कामले पनि गायिका प्रसाईंको लोकप्रियता
नेपाली नै संलग्न भएका अश्लील चलचित्र (ब्लु फिल्म) नेपालमा धेरै बनेका छैनन् । सानो ठाउँ भएकाले खराब कुराको चर्चा भइहाल्ने र छरछिमेकले समेत थाहा पाउने मात्र होइन, रातभरमै लाखौं प्रति